Motorola က Moto Z အကွာအဝေးတွင်မော်ဒယ်အသစ်များစတင်ထုတ်လုပ်မည် Androidsis
Moto Z အကွာအဝေးသည်စမ်းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီ၏အန္တရာယ်လည်းဖြစ်သည်။ သူတို့က၎င်း၏စျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်အယူအဆအသစ်တစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်ကတည်းက။ ၎င်းသည်လူကြိုက်များမှုများစွာကိုခံစားခဲ့ရသောအကွာအဝေးတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် Motorola ၏အလားအလာနှင့်စိတ်ကူးများကိုမြင်တွေ့ရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များတွင်၎င်းကိုမှတ်ချက်ချခဲ့သည် ကုမ္ပဏီသည်ဤစီမံကိန်းအားပိတ်ပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်.
ထို့ကြောင့် Moto Z အကွာအဝေး၏မော်ဒယ်များကိုဈေးကွက်တွင်ဖြန့်ချိမည်ဟုမျှော်လင့်မထားခဲ့ပါ။။ ဒါဟာအကွာအဝေးအတွင်းနောက်ဆုံးမော်ဒယ်ခဲ့အနည်းငယ်သာအောင်မြင်မှုဤကိစ်စတှငျအဆုံးအဖြတ်အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ပုံရသည်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးတော့ပိုင်ဆိုင်သည် Motorola ကသူတို့ရဲ့မော်ဒယ်လ်အသစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်မယ်လို့ကြေငြာလိုက်သည်.
ဒီနေ့ခေတ်မှာကုမ္ပဏီသည်အလွန်ကွဲပြားသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်သတင်းများရောက်ရှိနေသည်။ ကတည်းက 190 အင်ဂျင်နီယာများကိုပယ်ထားခဲ့ကြသည်။ များစွာသောသူတို့သည်ကုမ္ပဏီတွင်အရာရာမှားယွင်းနေသည်ဟူသောလက္ခဏာအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ ဒါကြောင့်လည်းဒီအကွာအဝေးကိုအဆုံးသတ်တော့မယ်လို့ကောလာဟလသတင်းများထွက်ခဲ့သည်။ သို့သော်ထိုသို့မပြုလုပ်နိုင်ပုံရသည်။
Moto Z အကွာအဝေးအတွင်း၌ဖုန်းများအားအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခန့်ရောင်းချမည်ဟု Motorola ကအတည်ပြုသည်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိကျွန်တော်တို့မှာဖုန်းတွေပိုများလာမယ်ဆိုတာသေချာနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကုမ္ပဏီကနောက်ထပ်စကားမပြောချင်ပါဘူး။ ဟောပြောချက်ကိုဖြစ်စေသောအရာတစ်ခုခု ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယခုမှ စ၍ တစ်နှစ်အကွာအဝေးကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Moto Z အကွာအဝေးကို ဆက်လက်၍ စျေးကွက်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ထားပါသည်။ တကယ်တော့ Motorola သည်မော်ဒယ်သစ်နှစ်မျိုးကိုမကြာခင်မှာပဲချိတ်ဆက်သင့်သည်။ အကြောင်း Moto Z3 နှင့် Z3 Play။ ဇန်နဝါရီလတွင်ဖုန်းနှစ်လုံးပေါက်ကြားခဲ့သည်။
မည်သည့်ဖုန်းကိုမှယခုအချိန်ထိဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျနော်တို့ဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲတောင်မှမသိရပါဘူး။ မကြာခင်သင့်ထံမှကြားနာရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Moto Z အကွာအဝေးတွင်ပုံစံအသစ်များရှိလိမ့်မည်ဟု Motorola ကအတည်ပြုသည်
သင့်ကားမည်မျှမြန်သည်ကိုသိရှိရန် Android application များ